သငျ့ရဲ့တဈနှဈအောကျ ဘဘေီလေးကို မကြှေးသငျ့သေးတဲ့ အစားအစာ (၁၀)မြိုး - Lifestyle Myanmar
Home Family သငျ့ရဲ့တဈနှဈအောကျ ဘဘေီလေးကို မကြှေးသငျ့သေးတဲ့ အစားအစာ (၁၀)မြိုး
သငျ့ရဲ့တဈနှဈအောကျ ဘဘေီလေးကို မကြှေးသငျ့သေးတဲ့ အစားအစာ (၁၀)မြိုး
မမေတေို့ရဲ့ ဘဘေီလေးတှကေို ဖွညျ့စှကျစာကြှေးဖို့ ၊ အစားအစာတှနေဲ့ မိတျဆကျပေးဖို့ စဉျးစားနပွေီလား? ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကလေးအသကျ ၅လကြျော၊ ၆လလောကျမှ ဖွညျ့စှကျစာကို စတငျကြှေးကွပါတယျ။ တဈနှဈအောကျဘဘေီလေးတှကေို အဲဒီလို ကြှေးတဲ့အခါမှာ ရှောငျရမယျ့ အစားအစာလေးတှေ ရှိပါတယျနျော။
ကွကျဥအကာဟာ ပရိုတိနျးအရငျးအမွဈ မွငျ့မားပွီး ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးတှေ ရှိပါတယျ။ တဈနှဈအောကျငယျတဲ့ ကလေးတှေ အတှကျတော့ အန်တရာယျရှိနိုငျပါတယျ။ ကွကျဥအကာထဲက ဘကျတီးရီးယားဟာ ဗိုကျအောငျ့/ဗိုကျနာတာတှေ ဖွဈစပွေီး အခွားနောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးမြားကို ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
မွပေဲထောပတျ မှာ ပိုတတျစီယမျ၊ ပရိုတိနျးနှငျ့ အမြှငျဓါတျကွှယျဝပါတယျ။ သို့သျောလညျး မွပေဲထောပတျရဲ့စေးကပျမှုကွောငျ့ နငျတာတှေ၊ သှားပွဿနာတှေ ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားက အာဟာရ၏ အရေးပါသော အရငျးအမွဈဖွဈပွီး နာတာရှညျရောဂါအမြားစုရဲ့ အန်တရာယျကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။ နောကျထပျအစားအစာမြားကို ဘဘေီလေးတှေ ရှောငျကွဉျသငျ့ပါတယျ။ မုနျလာဥနီကဲ့သို့သော ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားက ဘဘေီလေးကို သီးစနေိုငျတာကွောငျ့ ရှောငျရှားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
အစအေ့ဆနျတှမှော အမြှငျဓါတျ၊ ဗီတာမငျအီးနှငျ့ L-arginine တို့ကွှယျဝပါတယျ။ သို့သျောလညျး အစအေ့ဆနျမြားရဲ့ အရှယျအစားက အစာပွှနျပိတျဆို့ခွငျးနှငျ့ သငျ့ကလေးသေးသေးလေးကို နငျခွငျးတှေ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘာအစအေ့ဆနျမှ သငျ့ကလေးကို မကြှေးတာကောငျးပါတယျ။
စညျသှပျအစားအစာတှကေ သငျ့ဘဘေီလေးအတှကျ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ စညျသှပျအစားအစာ စားခွငျးကနေ သငျ့ကလေးကို ဘကျတီးရီးယားရောဂါပိုး ကူးစကျမှုနှငျ့ botulismကို ဖွဈပျေါနိုငျပါတယျ။
ငါးက လူကွီးတဈယောကျအတှကျ အသားအရေ၊ ဆံပငျနဲ့ နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ကလေးငယျကို ဓါတျမတညျ့မှု ဖွဈပျေါစခွေငျးနှငျ့ ကနျြးမာရေးကို ဆိုးရှားစှာ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဓါတျမတညျ့မှုဖွဈပျေါစတောကွောငျ့ အခှံမာရသေတ်တဝါ၊ ကဏနျးကဲ့သို့သော ပငျလယျစာတှေ ကြှေးတာရှောငျပါ။ ပငျလယျစာတှမှော သငျ့ကလေးအတှကျ အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ မာကြူရီပမာဏမွငျ့မားစှာ ပါဝငျလရှေိ့ပါတယျ။ ရခြေိုငါးတှေ ကြှေးမယျဆိုရငျတော့ ကြှေးလို့ရပါတယျ။
ပြားရညျက ရှေးအကဆြုံးနဲ့ လူကွိုကျအမြားဆုံး သဘာဝအခြိုအစားထိုးဖွဈပါတယျ။ ပြားရညျက ဆေးဘကျဝငျပမေယျ့ တဈနှဈအောကျ သငျ့ကလေးအတှကျတော့ အန်တရာယျ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ပြားရညျက ကလေးငယျတှအေတှကျ ရောဂါပိုးကူးစကျမှုကို ဦးတညျစနေိုငျတဲ့ အခွားညဈညမျးမှုမြားနဲ့ အပငျမြိုးမှုနျတှပေါဝငျပါတယျ။
သဈသီးဖြျောရညျတှဟော အရသာကောငျးပွီး ကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုပါတယျ။ သို့သျော အထူးသဖွငျ့ ထုတျပိုးမှုအမြိုးမြိုးနဲ့ သဈသီးဖြျောရညျတှမှော သငျ့ကလေးရဲ့ အစာခွစေနဈကို မဆောငျရှကျနျိုငျတဲ့ တာရှညျခံအမြားအပွားပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ကလေးသေးသေးလေးကို သဈသီးဖြျောရညျ တိုကျကြှေးမှု ရှောငျပါ။ သငျ့ကလေးရဲ့ အစားအစာအတှကျ လတျဆတျတဲ့ သဈသီးဖြျောရညျကို မိတျမဆကျခငျမှာ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပါ။
၉။ Whole Milk
ပရိုတိနျးနှငျ့ သတ်တုဓါတျတှေ နှားနို့မှာ ပါဝငျပမေယျ့ ၁၂လအောကျကလေးကို မကြှေးသငျ့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အူလမျးကွောငျးအငျဇိုငျးတှကေ သူတို့ရဲ့အမွငျ့ဆုံးဖှံဖွိုးတိုးတတျမှုအဆငျ့ကို မရောကျရှိသေးပါဘူး။ ကလေးတဈယောကျဟာ ဒီအသကျအရှယျမှာ ဒီနို့အမြိုးအစားတှထေဲက ပရိုတိနျးတှကေို အစာမခွနေိုငျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ နို့တှမှော သူတို့ရဲ့ကြောကျကပျကို ထိခိုကျစနျေိုငျတဲ့ သတ်တုဓါတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။
လိမ်မျော၊ သံပုရာနှငျ့ တခွားခဉျြတဲ့ အသီးအနှံတှဟော ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျပွီး ဗီတာမငျစီ၊ ကယျလျစီယမျနှငျ့ ပိုတတျစီယမျကဲ့သို့သော မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ အာဟာရတှေ ပါဝငျပါတယျ။ သို့သျော ဒီအသီးအနှံတှကေ အကျဆဈအလှနျအမငျးပါတာကွောငျ့ ကလေးအတှကျ အစာအိမျပွဿနာမြားကို ဦးတညျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တဈနှဈအရှယျထိ ခဉျြတဲ့ ဘာအသီးမဆို ကလေးကို ကြှေးခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။
မေမေတို့ရဲ့ ဘေဘီလေးတွေကို ဖြည့်စွက်စာကျွေးဖို့ ၊ အစားအစာတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စဉ်းစားနေပြီလား? ပုံမှန်အားဖြင့် ကလေးအသက် ၅လကျော်၊ ၆လလောက်မှ ဖြည့်စွက်စာကို စတင်ကျွေးကြပါတယ်။ တစ်နှစ်အောက်ဘေဘီလေးတွေကို အဲဒီလို ကျွေးတဲ့အခါမှာ ရှောင်ရမယ့် အစားအစာလေးတွေ ရှိပါတယ်နော်။
ကြက်ဥအကာဟာ ပရိုတိန်းအရင်းအမြစ် မြင့်မားပြီး ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်နှစ်အောက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေ အတွက်တော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြက်ဥအကာထဲက ဘက်တီးရီးယားဟာ ဗိုက်အောင့်/ဗိုက်နာတာတွေ ဖြစ်စေပြီး အခြားနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မြေပဲထောပတ် မှာ ပိုတတ်စီယမ်၊ ပရိုတိန်းနှင့် အမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ သို့သော်လည်း မြေပဲထောပတ်ရဲ့စေးကပ်မှုကြောင့် နင်တာတွေ၊ သွားပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များက အာဟာရ၏ အရေးပါသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး နာတာရှည်ရောဂါအများစုရဲ့ အန္တရာယ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ နောက်ထပ်အစားအစာများကို ဘေဘီလေးတွေ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ မုန်လာဥနီကဲ့သို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များက ဘေဘီလေးကို သီးစေနိုင်တာကြောင့် ရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အစေ့အဆန်တွေမှာ အမျှင်ဓါတ်၊ ဗီတာမင်အီးနှင့် L-arginine တို့ကြွယ်ဝပါတယ်။ သို့သော်လည်း အစေ့အဆန်များရဲ့ အရွယ်အစားက အစာပြွန်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် သင့်ကလေးသေးသေးလေးကို နင်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘာအစေ့အဆန်မှ သင့်ကလေးကို မကျွေးတာကောင်းပါတယ်။
စည်သွပ်အစားအစာတွေက သင့်ဘေဘီလေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ စည်သွပ်အစားအစာ စားခြင်းကနေ သင့်ကလေးကို ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုး ကူးစက်မှုနှင့် botulismကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ငါးက လူကြီးတစ်ယောက်အတွက် အသားအရေ၊ ဆံပင်နဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကို ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် အခွံမာရေသတ္တဝါ၊ ကဏန်းကဲ့သို့သော ပင်လယ်စာတွေ ကျွေးတာရှောင်ပါ။ ပင်လယ်စာတွေမှာ သင့်ကလေးအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ မာကျူရီပမာဏမြင့်မားစွာ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ရေချိုငါးတွေ ကျွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွေးလို့ရပါတယ်။
ပျားရည်က ရှေးအကျဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး သဘာဝအချိုအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပျားရည်က ဆေးဘက်ဝင်ပေမယ့် တစ်နှစ်အောက် သင့်ကလေးအတွက်တော့ အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပျားရည်က ကလေးငယ်တွေအတွက် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကို ဦးတည်စေနိုင်တဲ့ အခြားညစ်ညမ်းမှုများနဲ့ အပင်မျိုးမှုန်တွေပါဝင်ပါတယ်။
သစ်သီးဖျော်ရည်တွေဟာ အရသာကောင်းပြီး ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သို့သော် အထူးသဖြင့် ထုတ်ပိုးမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်တွေမှာ သင့်ကလေးရဲ့ အစာခြေစနစ်ကို မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ တာရှည်ခံအများအပြားပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကလေးသေးသေးလေးကို သစ်သီးဖျော်ရည် တိုက်ကျွေးမှု ရှောင်ပါ။ သင့်ကလေးရဲ့ အစားအစာအတွက် လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည်ကို မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ပရိုတိန်းနှင့် သတ္တုဓါတ်တွေ နွားနို့မှာ ပါဝင်ပေမယ့် ၁၂လအောက်ကလေးကို မကျွေးသင့်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အူလမ်းကြောင်းအင်ဇိုင်းတွေက သူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးဖွံဖြိုးတိုးတတ်မှုအဆင့်ကို မရောက်ရှိသေးပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ ဒီအသက်အရွယ်မှာ ဒီနို့အမျိုးအစားတွေထဲက ပရိုတိန်းတွေကို အစာမခြေနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် နို့တွေမှာ သူတို့ရဲ့ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ သတ္တုဓါတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လိမ္မော်၊ သံပုရာနှင့် တခြားချဉ်တဲ့ အသီးအနှံတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး ဗီတာမင်စီ၊ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ပိုတတ်စီယမ်ကဲ့သို့သော မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော် ဒီအသီးအနှံတွေက အက်ဆစ်အလွန်အမင်းပါတာကြောင့် ကလေးအတွက် အစာအိမ်ပြဿနာများကို ဦးတည်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နှစ်အရွယ်ထိ ချဉ်တဲ့ ဘာအသီးမဆို ကလေးကို ကျွေးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
Previous article၁၀မိနစ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးက အဆီတွေကို လျော့ချပေးမဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း
Next articleဖုန်းအားသွင်းရင်တန်းလန်းနဲ့ ဂိမ်းကစားတဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖြေမဆည်နိုင်စရာ အဖြစ်ဆိုး